क्रिकेटर युवराज सिंहको अवकाश बारे के भन्छिन् पूर्व प्रेमिका किम शर्मा ? | Ratopati
क्रिकेटर युवराज सिंहको अवकाश बारे के भन्छिन् पूर्व प्रेमिका किम शर्मा ?
क्रिकेटर युवराज सिंहले सोमबार अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन् । क्रिकेटलगायत सिनेमा जगतका व्यक्तित्वले युवराजलाई नयाँ इनिङका लागि बधाई दिँदै उनका शानदार यात्रालाई याद गरे । युवराजलाई बधाई दिनेमा अनुष्का शर्मा, वरुण धवन, अनुपम खेरजस्ता सेलिब्रिटी समावेश छन् । साथै, उनकी पूर्व प्रेमिका किम शर्माले पनि युवराजलाई नयाँ इनिङको बधाई दिइन् ।
हेजलको पोष्टमा कमेन्ट गर्दै बलिउडका विभिन्न सेलिब्रिटीले युवराजलाई बधाई दिए । स्मरण रहोस्, किम शर्मा र युवराज सिंह लामो समयसम्म सम्बन्धमा थिए । यी दुईको विवाहसमेत हुने चर्चा थियो तर युवराजकी आमाले उनीहरुको सम्बन्ध अस्विकार गरेपछि यी दुईबीच दरार आएको थियो ।
यस्तै, नायक वरुण धवनले ट्वीटरमा युवराजको एउटा तस्बिर सेयर गर्दै युवराजलाई राम्रो याद दिलाएको र खेलका महान एम्बेसडर रहनका लागि धन्यवाद दिए ।